घर युरोपियन स्टार डान-एक्सेल Zagadou बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
डान-एक्सेल Zagadou बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य। क्रेडिट: गोल र Sortitoutsi
सुरू गर्दै, उनको उपनाम "Daxo“। हाम्रो लेखले तपाईंलाई डेन-एक्सेल Zagadou बचपन कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्यहरू, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज दिन्छ जब उहाँ बच्चा हुनुभयो जबदेखि उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो।
डेन-एक्सेल Zagadou को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: गोल र BVB।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ महान कसरत र अवरोधन कौशलका साथ विशाल डिफेन्डर हुनुहुन्छ। जहाँसम्म, केवल थोरैले हाम्रो दान-एक्सेल Zagadou को जीवनी को संस्करण मा विचार गर्नुहोस् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं, पहिले दान x एक्सेल Zagadou को विकी संग, हाम्रो सामग्रीको टेबुल पछि पूर्ण कहानी.
डेन-एक्सेल Zagadou जीवनी (विकी Inquiries)
पुरा नाम: Dan-Axel Zagadou
जन्म मिति: तेस्रो जुन १31999 20 (उमेर २० वर्ष मार्च २०२० को रूपमा)
अभिभावक: श्री र श्रीमती Zagadou
Siblings: ड्रेसिy (भाई) र योहान (भाई)
उचाइ: 1.96 मीटर (6 फुट5मा)
पारिवारिक मूल: कोट डी'आइवर
व्यवसाय: फुटबलर (केन्द्र-फिर्ता, बाँया पछाडि)
व्यक्तिगत जीवन लक्षण: कोमल, मायालु, जिज्ञासु, अनुकूल र छिटो सिक्ने क्षमता
जहाँ उहाँ हुर्कनुभयो: क्रेटिल, फ्रान्स (आफ्नो जन्मस्थान)
फुटबल शिक्षा: युएस क्रुटिल र पीएसजी
डेन-एक्सेल Zagadou को बचपन कहानी:
डेन-एक्सेल Zagadou परिवार पृष्ठभूमि:
डेन-एक्सेल Zagadou शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
डेन-एक्सेल Zagadou फुटबल मा प्रारम्भिक वर्ष:
डेन-एक्सेल Zagadou को प्रख्यात कथा:
डान-एक्सेल Zagadou - ख्याति कथा उठ्नुहोस्
डान-एक्सेल Zagadou को प्रेमिका को हो ?:
डेन-एक्सेल Zagadou पारिवारिक जीवन:
डेन-एक्सेल Zagadou बुबा र आमाको बारेमा:
दान-एक्सेल Zagadou भाइबहिनीहरूको बारेमा:
डेन-एक्सेल Zagadou का सम्बन्ध बारे:
डेन-एक्सेल Zagadou व्यक्तिगत जीवन:
डेन-एक्सेल Zagadou को जीवन शैली:
डेन-एक्सेल Zagadou तथ्य:
तथ्य # 1 - उहाँको नम्र वेतन शुरुआत बारे:
तथ्य #3- फिफा श्रेणीकरण:
तथ्य #4- धुम्रपान र मदिरा:
तथ्य #5- ट्याटूहरू:
सुरू गर्दै, Dan-Axel Zagadou जून १ é 3। को तेस्रो दिन फ्रान्सको क्रेटिलको कमनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो सानो ज्ञात बुबा र आमाको लागि जन्मेका धेरै बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ।
जवान डेन-एक्सेल फ्रान्सको पेरिसको दक्षिणपूर्वी उपनगर, क्रटेलमा हुर्किसकेका भाइबहिनीसँगै लेखिएका बेला हामीलाई दुई जना मात्र चिन्थे। तिनीहरू उनका ठूला दाजुहरु हुन् जो ड्रेसी र योहान।
फ्रान्सको नक्शामा डेन-एक्सेल हुर्किएको स्थान हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिटहरू: WorldAtlas र लक्ष्य।
क्रिटिल डान-एक्सेलमा हुर्किएको एक कडा र एथलेटिक बच्चा थियो जसले फुटबल खेलेर आफ्नो जेठो भाई ड्रेस्सीको मार्गमा हिंड्ने छनौट गरे जुन क्रिटिलको कम्युनमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो।
डेन-एक्सेल अभिभावक दुबै इभोरियनहरू हुन् तर उनीहरूको प्रतिरोधको साथ विकासको भेला हुन सकेन तर उनीहरूको सबैभन्दा होनहार छोरा-डान-एक्सेलको जन्म हुनुभन्दा धेरै अघि फ्रान्स बसाइँ सर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरे।
अधिकांश आप्रवासी परिवारका प्रमुखहरू जस्तै डान-एक्सेलका अभिभावकहरूले उनीहरूको आशालाई उच्च राखेका थिए र उनीहरूका बच्चाहरू खेलकुद र शैक्षिक संलग्नताहरूको माध्यमबाट परिवारका लागि उत्तम भविष्यको आशावादी थिए।
यस जीवनी लेख्दाको समयमा डान-एक्सेल अभिभावकहरूको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुँदैन। छवि क्रेडिट: गोल र क्लिपआर्टस्टूडियो।
त्यस्तै, उनीहरू डेन-एक्सेल गृहनगर क्लब - युएस क्रिटिलमा सामेल हुन पाउँदा खुसी भए। यो स्थानीय क्लब मा थियो कि उनले धेरै युवा उमेर बाट परिवारको समर्थन संग प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न शुरू गरे।
स्थानीय क्लब युएस क्रिटिल - लुसितानोस त्यहाँ थिए जहाँ डान-एलेक्सले प्रतिस्पर्धी फुटबलमा पहिलो कदम चालेका थिए। छवि क्रेडिट: गोल र फुटबॉललगोस।
ती युवाहरू यसमा हुँदा, उनले आफ्ना शिक्षाविद्हरूमा पर्याप्त ध्यान दिए र शिक्षालाई उनको चहुँमुखी विकासको लागि फाइदाजनक ठाने। अचम्म नमान्ने डान-एक्सेल धेरै वर्ष पछि विश्वभरि बच्चाहरूलाई स्कूल जाने सल्लाह दिन्थे। उनको अनुसार, स्कूल गर्नु भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो।
त्यो समयमा पनि फुटबल डान-एक्सेलको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। यो कुरा त्यसरी प्रस्ट देखिन्छ जुन अमेरिकी क्रुटेलका कनिष्ठ समूहमा उनको प्रभावकारी विकासले पेरिस सेन्ट-जर्मेनलाई उनको सम्भावनाको रूपमा लिने बनायो।
नतिजा स्वरूप, डान-एक्सेललाई १२ वर्षको उमेरमा PSG मा ल्याइएको थियो। उनी २०१ Les मा क्लबको रिजर्भ टीमको सदस्य नहोउन्जेल लेस पेरिसियन्सको स्तरमा लगातार वृद्धि हुन थाले।
स्तरको माध्यमबाट उठ्दो: PSG युवा क्रममा फुटबल प्रतिभाको एक दुर्लभ तस्बिर। छवि क्रेडिट: गोल।
PSG को रिजर्भ टीमको साथ हुँदा, डान-एक्सेलले २०१––१ French को फ्रान्सेली चौथो-स्तर फुटबल प्रणालीमा appea वटा मात्र उपस्थित भएका थिए जसलाई चम्पिनेट ना फ्रान्स एमेच्योर भनिन्छ। त्यो सिजनको अन्त्यमा, उसलाई स्पष्ट भयो कि PSG को पहिलो टीममा सफलता हासिल गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ।
यद्यपि क्लबको प्रबन्धनले डेन-एक्सेल र अन्य खेलाडीहरूलाई उज्जवल भविष्यको स्थितिमा आश्वासन दिन प्रेरणादायी भूमिका खेलेको छ, उसले निर्णयमा पछुताउनुपर्दैन भन्ने आशाको साथ छोड्ने छनौट गर्दछ।
पीएसजी पहिलो-टोलीमा भर्खरै भर्खर भर्खरको युवा टोलीमा भर्ना हुने प्रतिबद्धताले उनलाई भ्रमात्मक तुल्यायो, त्यसैले फ्रान्सेली क्लब छोड्ने उनको निर्णय भयो। छवि क्रेडिट: गोल।
के तपाईंलाई थाहा छ ड्यान-एक्सेलले म्यानचेस्टर सिटी र आरबी लाइपजिगबाट प्रगति लिन सकेन? बरु, उनले युवा टिमको पहिलो टीम फुटबलको प्रगतिशील स्वाद पाउने अवसर प्रदान गर्ने क्लबको ट्र्याक रेकर्डलाई ध्यानमा राख्दै बोरुसिया डार्टमन्डलाई आफ्नो हस्ताक्षर choseण दिने छनौट गरे।
यद्यपि डिफेंडरले आफ्नो पहिलो सत्र (२०१/2017/२०१2018) को दौरान जर्मन पक्षका लागि थोरै संघर्ष गरे पनि उनको साथीसँगको मित्रता पियरे-अमेरिक Aubemeyang र Ousmane Dembele अन्य कारकहरु मध्ये उनी अर्को वर्ष (२०१/2018 / २०१ 2019) बने। यस बायो लेख्ने समय भन्दा छिटो, डान-एक्सेल एक शक्तिशाली अन-पिच उपस्थितिको साथ डोर्टमन्डको एक प्रमुख बचावकर्ता हो जुन विपक्षी स्ट्राइकरलाई उछाल गर्न पर्याप्त छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डिफेन्डिंग मेस्ट्रो बरुसिया डार्टमन्डमा खुसी छन् जहाँ उनी विपक्षी स्ट्राइकरहरूका लागि ठूलो खतरा हो। छवि क्रेडिट: गोल।
कुनै पनि डिफेन्डर जो डेन-एक्सेल जस्तो अग्लो र निष्पक्ष सुन्दर छ एक पत्नीको साथ वा नराम्रो, एक प्रेमिका बिना उत्तम हुन सक्छ। डेन-एक्सेल सम्बन्ध स्थिति एकल हुन tilts लेख्न को लागी जबकि उसका कुनै छोरा वा छोरीहरु विवाह बाहिर छ।
डिफेन्डरले बुझ्दछ कि आकर्षक हुनुमा मनोरमात्मक तरिकामा रक्षा गर्नु समावेश छ। त्यस्तै, उसले आफ्नो कलाको सिद्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ किनकि उसले शीर्ष उडान फूटबल खेल्ने अवसरहरू मिति दिँदै छ।
एकल डेन-एक्सेल Zagadou एक प्रेमिका को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी यस प्रकारको छुट्टीको लागि। के तपाईं सहमत हुनुहुन्न ?. छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डेन-एक्सेलको आश्चर्यजनक उदय र उसको स्नीफ डिफेन्सिबल क्षमताहरूको पछाडि उत्साहजनक परिवार छ। हामी तपाईं लाई डिफेन्डरहरूको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं।
डेन-एक्सेलको आमा र बुबा खेल प्रेम गर्ने व्यक्ति हुन् जसले जीवन रक्षकको समर्थन र समर्थनमा सहयोगी भूमिका खेल्छन्। उहाँलाई सबैभन्दा ठूलो उपहार उनी जन्मनुभन्दा धेरै अघि आइभरी कोस्टबाट फ्रान्समा बसाई सरेका थिए।
यो किनभने फ्रान्सले आफ्नो परिवारको भूमि भन्दा डिफेंडरलाई बढी अवसरहरू प्रदान गर्‍यो। यद्यपि दुबै आमाबुवा अझै जर्मनीको स्टन्डबाट डिफेन्डरको जयजयकार गरिरहेको देखिएन, तर त्यो युरोपियन फुटबलमा उसले हासिल गरिरहेको माइलस्टोनको मान्यतालाई स्वीकार गर्न धेरै समय लागेन।
डान-एक्सेलका4भाईहरू छन् जसको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छ। तिनीहरूले ड्रेसि र योहान समावेश गर्दछ। योहान जेठो दाइ वा दिदी हुन् जो डेन-एक्सेलको साथ जर्मनीमा बस्छन् र यो निश्चित गर्छन् कि उसले कहिल्यै ध्यान गुमाउँदैन। उनको पक्षमा, ड्रेसि पनि एक जेठो दाइ हुन् जसको फुटबलमा प्रारम्भिक प्रेरणादायी गतिविधिहरूले डान-एक्सेललाई बाल्यकालको खेलको रूपमा अपनायो।
डेन-एक्सेल आफ्नो जेठो दाइ र कार्यवाहक योहानको साथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पोशाकले स्प्यानिश तेस्रो डिभिजन क्लब सान्ता क्याटालिनामा २ नम्बरको डिफेन्सीसी क्षमतामा खेल्दछ र डान-एक्सेलले नम्बर २ शर्ट नम्बर लगाउने छनौट गरेको कारण हो। यद्यपि डेन-एक्सेल बहिनी (हरू) को बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन तर हामी सकारात्मक छौं कि उसको कम्तिमा एउटा बहिनी छ विशेष गरी तलको फोटो अध्ययन गरेपछि।
डान-एक्सेल थोरै ज्ञात परिवार सदस्यहरूको साथ। छवि क्रेडिट: WTFoot।
डेन-एक्सेल निकट पारिवारिक जीवनबाट धेरै टाढा, आफ्नो पुर्खा र पारिवारिक जराको बारेमा धेरै जान्दैनथ्यो विशेष गरी यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी, त्यहाँ डिफेन्डर काका, काकी र काकाको कुनै रेकर्ड छैन जबकि उसका भतिजा र भतिजीहरू अझै अज्ञात छन।
के तपाईंलाई थाहा छ डान-एक्सेलले मनमोहक व्यक्तित्वका लक्षणहरू समावेश गर्दछ जुन भावनात्मक बुद्धिमत्ता, फोकस र नम्रता समावेश गर्दछ। थप रूपमा, उनी जान्दछन् कि कसरी मानिसहरूसँग जडान गर्ने र आफैंमा अभिव्यक्तिको उपहार पनि छ।
अद्भुत डिफेन्डर जसको राशिफल मिथुन मिथुन मिथ्या हो उनको निजी र व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी विवरण विरलै प्रकट गर्दछ जबकि गतिविधिहरु जसले उसको रुचि र शौक बनाउँछ चलचित्र हेर्ने, संगीत सुन्न, शपिंग र आफ्नो परिवार र साथीहरु संग राम्रो समय बिताउने।
डेन-एक्सेल किनमेल मन पराउँछन्। गतिविधि पछि आफ्नो साथीसँग पोष्ट गरेको उनको फोटो हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिट: WTFoot।
कसरी दान-एक्सेल Zagadou बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च, यो जैव लेख्न को लागी उहाँसँग लगभग $ 455,460 को कुल मूल्य छ। डिफेन्डरहरूको नेट वर्थमा स्ट्रिमहरू योगदान पुर्‍याउनुमा उसले पहिलो टीम टोली फुटबलको लागि खेल्ने वेतन र ज्याला शामिल गर्दछ।
थप रूपमा, एडिडास जस्ता ब्रान्डको समर्थनले उसको सम्पत्ती आधार बढाउन धेरै गर्छ। नतिजा स्वरूप, जवान डान-एक्सेल जीवनको रमाइलोको लागि विदेशी होइनन् जसमा जर्मनीको सडकमा मह expensive्गा कारहरूको साथ यात्रा गर्नु समावेश छ जसमा विदेशी मर्सिडीज समावेश छ र महँगो अपार्टमेन्ट र घरहरूमा बस्नुपर्दछ।
थोरै ज्ञात विदेशी मर्सिडीज कारमा शटको लागि प्रस्तुत डिफेंडर हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिट: WTFoot।
हाम्रो डेन-एक्सेल Zagadou बचपन कहानी र जीवनी को अन्त गर्न यहाँ रक्षाकर्ताको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # 1 - उसको नम्र पारिश्रमिक सुरुवातको बारेमा:
जबदेखि उनले क्लब फुटबल दृश्यमा भड्काए, त्यहाँ डेन-एलेक्स जगाडाउले कति कमाउँछन् त्यहाँ चासो छ। सत्य हो, टीउनी फ्रान्सेली बोरसिया डार्टमंडले गरेको सम्झौतामा उनले वरिपरि नम्र पारिश्रमिक देखीरहेछन् € 234,000 यूरो प्रति वर्ष। त्यो सानो स into्ख्यामा क्रन्चिing गर्दै, हामीसँग निम्न आयहरू प्रति वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड (लेखेको समयमा जस्तै).
प्रति वर्ष € 234,000 £ 200,000 $ 263,743.74
प्रति महिना € 19,500 £ 16,666.6 $ 21,978.6
प्रति हप्ता € 4,500 £ 3,846.15 $ 5,494.7
प्रति दिन € 641.10 £ 547.94 $ 784.96
प्रति घण्टा € 26.71 £ 22.83 $ 32.70
प्रति मिनेट € 0.45 £ 0.38 $ 0.54
प्रति सेकेन्ड € 0.01 £ 0.01 $ 0.009
तपाईले यस पृष्ठलाई अवलोकन गर्न शुरू गरेदेखि यती धेरै डान-एक्सेल Zagadou ले कमाएको छ।
यदि तपाइँ माथि के देख्नुहुन्छ पढ्छ (०), यसको मतलव तपाई एएमपी पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ सेकेन्डमा उसको तलब वृद्धि देख्न. तपाईंलाई थाँहा थियो?… फ्रान्स मा औसत मानिस कम्तिमा काम गर्नु पर्छ 6.5 महिना कमाउन € 19,500, जुन डान-एक्सेल Zagadou एक महिना मा अर्जित रकम हो।
डेन-एक्सेल ज़ागाडुका आमा-बुबाले उनलाई इसाई धार्मिक विश्वासको पालनामा हुर्काए। ट्रस हो, उहाँ एक इसाई हुनुहुन्छ र त्यसमा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उनले एक पटक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि उसको अन्धविश्वासमा एउटा बाइबल पढ्नु र खेलहरू सुरु हुनु अघि प्रार्थना गर्नु समावेश छ।
डान-एक्सेलसँग F points अ of्कको समग्र फिफा रेटिंग छ। निष्पक्ष मूल्या but्कन तर उहाँ कति फुटबलमा आउनुभयो भन्नेको प्रगतिशील प्रमाणिकरण हो। यसले यो पनि प्रमाणित गर्दछ कि यो डिफेन्डरले potential 79 को सम्भावित मूल्या rating्कन प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले समयको कुरा मात्र हुनेछ।
उसको रेटिंग्सहरू मौसमका साथ meteoric वृद्धि सम्भावना संग निष्पक्ष छन्। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
डान-एक्सेल धूम्रपान गर्दैन र गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा पिई समातिएको छैन। यसले यस तथ्यलाई रेखांकित गर्दछ कि फुटबल प्रतिभाले कसरी पेशागत तरीकाले आफूलाई कम्पायर गर्न जान्छ र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अप्राकृतिक कुनै बानी संलग्न गर्दैन।
डेन-एक्सेल लेख्ने समयमा ट्याटू वा बडी आर्ट बिना नै छ। ऊ बरु राम्रो शरीर निर्माणको साथ ट्यूनमा छ जुन उसको प्रभावशाली उचाइ feet फिट, inches इन्चको साथ छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डेन-एक्सेल Zagadou बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नको लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।